Sunday December 02, 2018 - 10:13:06 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War kasoo baxay wasaaradda gaashaandhiga Mareykanka ayaa lagu xaqiijiyay in Admiral Scott Sterne oo ahaa taliyaha ugu sarreeya ciidamada badda Maraykanka ee dagaalka ka wada mandiqada bariga dhexe maydkiisa la helay maalintii shalay oo Sabti ahayd.
Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay in Scott Sterne uu ahaa taliyaha xarunta hoggaanka dhexe ee ciidamada iyo hoggaamiyaha isduulka shanaad ee guud ahaan ciidamada Mareykanka kuwaas oo saldhigoodu uu ku yaallo wadanka Baxrayn.
Maydka hoggaamiyahan americanka ah ayaa la sheegay in laga dhex helay goob uu deganaa oo ku taallla isla wadanka Baxrayn.
Mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa ka gaabsaday in ay ka hadlaan sababta keentay geerida mas'uulkaan sare ee ka tirsanaa ciidamadooda colaada ka hurinaya wadamada caalamka Islaamka.
Taliyahan Meydkiisa la helay ayaa ka tirsanaa ciidamada badda Mareykanka tan iyo sanadkii 1982, waxaa uu hadda taliye u ahaa in ka badan 20 kun oo kamid ah ciidanka Badda Maraykanka sida lagu sheegay warka kasoo baxay dowladaasi hoggaanka u haysa duullaanka Saliibiga ah ee lagu soo qaaday Dunida Islaamka.
Mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegaya in iyagoo kaashanaya wasaaradda arrimaha gudaha Baxrayn ay baaritaan ku wadaan sababta keentay geerida hoggaamiyahan ciidan ee meydkiisa laga helay goobtii taliska u aheyd ee uu ka hoggaaminayay ciidamada Maraykanka ee ka hawgala wadama ku yaalla mandiqada bariga dhexe,